သစ်သီးဝလံ၊ပန်းမာလ်၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၏​ မျိုးစေ့များ… FREE ပေးရန်ရှိသည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Editor's Notes » သစ်သီးဝလံ၊ပန်းမာလ်၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၏​ မျိုးစေ့များ… FREE ပေးရန်ရှိသည်။	109
အဲဒီမျိုးစေ့တွေ.. တကယ်ဝယ်ပြီး… မြန်မာပြည်လာဖြစ်ရင်.. တကယ်စိုက်မယ့်သူတွေကို.. လက်ဆောင်ပေးချင်လို့…။
လက်ဆောင်တွေထဲ.. သစ်စေ့.. မျိုးစေ့..တွေပေးချင်တာ…။
နောင်.. ၅-၁၀-၁၀၀ နှစ်တွေကြာတော့… ဤသစ်သီးဝလံ.. ပန်းမာန်ကို… ဤသူ မြန်မာပြည်သို့… တင်သွင်းခဲ့သည်ဖြစ်ချင်လို့..။
ရွာထဲ.. သစ်မွေးပင်စိုက်စားတဲ့တယောက်လည်း.. ရှိဖူးတယ်မှတ်မိတယ်..၊
တကယ်လိုချင်သူတွေ.. တကယ်လိုချင်တဲ့မျိုးစေ့လေးများရှိရင်.. စာရင်းပေးကြပါလေ…။
ခင်ဇော် says: မနေ့က မန့် မှာ တွေ့ကတည်းး က တောင်းးချင်နေတာ.. ဟီးးးး
စေတနာ ရှိသလောက် အမျိုးး စုံလေးး ကြိုက်ရာပေးးပါညော် 😁😁😁
kai says: အော်ဒါတွေတက်လာရင်.. ၀ယ်လိုက်တဲ့အထဲက..
တမျိုး.. တစေ့စီရမယ်…။ ကြည့်သာစိုက်ပေတော့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: Lettuce Mix 20 Varieties Heirloom
kai says: Ancho Poblano Hot Pepper
kai says: The açaí palm (Portuguese: [aˌsaˈi] ( listen), from Tupi-Guarani asaí; Euterpe oleracea) isaspecies of palm tree in the genus Euterpe cultivated for its fruit and hearts of palm. Its name comes from the Brazilian Portuguese adaptation of the Tupian word ïwaca’i, ‘[fruit that] cries or expels water’. Global demand for the fruit has expanded rapidly in recent years, and açaí is now cultivated for that purpose primarily. Euterpe edulis (juçara) isaclosely related species which is now the primary source of hearts of palm. 
kai says: အဲဒီ အဆအိ ဘယ်ရီပင် မြန်မာပြည်မယ်စိုက်လို့ရမရ သိချင်တယ်..။
ကျန်းမာရေးအတွက်တော်တော်ဆေးဖက်ဝင်သမို့.. စိုက်ကြတာမှာ.. ယူအက်စ်မှာ တော်တော်ခေတ်စားလာတာပါ…။
…. အဲဒီဂျူ့စ်.. တပုလင်း.. ၈ဒေါ်လာမကပေးရပါတယ်…။ မြန်မာပြည်မယ်စိုက်စားရင်.. မီလီယံဘစ်ဇနက်..။ http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/benefits-of-acai/
ခင်ဇော် says: အာ့ဒါ Cranberry ခေါ်တယ်ဟုတ်??
ပန်းးပင်တွေ က ပိုလိုချင်စရာ..
kai says: ခရန်ဘယ်ရီက အနီ…။ အဆအိက.. ခရမ်း..။ သူ့ဂျူ့စ်က ပြစ်လည်းပြစ်တယ်..။
uncle gyi says: မြန်မာပြည်မှာတော့အဲပုံစံအပင်မမြင်ဖူးသေးပါသူကြီးရေ
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ချဉ်ပေါင်ပင်တောင် မစိုက်ဖူးတော့ အခက်သားဗျာ
ခင်ဇော် says: ငင့်..
နာ က ရဲရဲဂျီးး တောင်းနေချိန်မှာ လာ သတိပေးးရသလားးးး
Wow says: လှလိုက်တာ တဂျီးရယ် နှင်းဆီပန်းတွေပြောပါဒယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: ငရုပ်ဆုံကြီးကရော.. မလှဘူးလား..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: သဂျီး စိတ်ကူးတအားကောင်းတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အပေါ်က နှင်းဆီပန်းတွေက မျိုးစေ့စိုက်ရတာ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ အောက်က ပန်းနုနုလေးတွေကလည်း မြန်မာပြည်ရာသီဥတုနဲ့ မရလောက်ဘူး။ ငရုတ်သီးကျတော့လည်း မစားချင်။
ိdragon fruit မျိုးစေ့ကိုတော့ လိုချင်ပါတယ် သဂျီးရေ။ သူက အပူကြိုက်တယ် ထင်တယ်။ သဂျီးသယ်လာမယ့် မျိုးစေ့တွေ အကုန်လာယူမယ်။
အဆာအိ အပင်က မအူပင်ပန်းခြံထဲမှာ ရှိတယ်။ စားရကောင်းမှန်း ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။ ပျိုးကြည့်တာ ပေါက်လည်း မပေါက်ဘူး။ အဲမျိုးစေ့တော့ မလိုချင်ဘူး
မြစပဲရိုး says: Rose seeds ရှိတယ် ညီမပြုံး ရ။
ဒါပေမဲ့ ပန်းရောင် Parade Rose ဘဲ မြင်ဖူးတယ်။ ကာလာအကျား တွေ နဲ့ တော့ တစ်ခါမှ အပြင်မယ် မတွေ့ဖူးဘူး။
kai says: ပန်းနုနုလေးတွေဆိုတာ… လေးထောင့်ပန်းအိုးထဲကအပင်တွေကိုပြောတာဆိုရင်တော့…
အဲဒါတွေက.. (သိသလောက်) ကန္တာရမျိုးတွေဗျ…။
မြစပဲရိုး says: အဲဒီ ကန္တာရ အပင် ကပ်တပ်စ် တွေက ဟိုးကထဲ က မြေပဒေသာကျွန်းမှာ ဝယ်လို့ ရတယ် သူကြီး ရ။
နှင်းဆီပန်းကျား တွေ သာ မရှိလောက်တာ။
Ma Ma says: ကန္တာရမျိုးတွေက ဒီမှာလည်း ရနိုင်တယ်။
အရောင်ဆန်း အရောင်စပ် နှင်းဆီတွေသာ ဒီမှာ မမြင်ဖူးတာ။
kai says:4kinds mix pitaya dragon fruit yellow Seed Fragrant cactus rare exotic
နဂါးမောက်သီးက ၄မျိုးရှိတယ်..။ ၄မျိုးလုံးမှာလိုက်တယ်..။ လက်ဆောင်ပေးမယ်..။
အဆအိအပင်က..အသီးသီးရင်.. ဒီအတိုင်းအစေ့ကို ကြိတ်သောက်ကြည့်ပေါ့..။
အဲဒါက.. တော်တော်ဈေးကြီးတာ..။ အမေဇုံတောဖက်က.. အဲဒါနဲ့တင်.. စီးပွားဖြစ်ကုန်တာမို့.. အဲဒီအပင်သာ သဘာဝအတိုင်းပေါက်နေနိုင်ရင်.. တခြား.. ဆီအုန်းတို့.. အုန်းပင်တို့ထက်..အများကြီးစီးပွားဖြစ်မယ့်အပင်… လို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: နဂါးမောက် အစုံယူမယ် သဂျီးရေ။ cactus တော့ မယူဘူး။ rainbow ပန်းရောင်စုံလည်း ရမယ်ဆို နည်းနည်းလိုချင်ပါတယ်။ သူက အအေးကြိုက်မယ် ထင်တယ်။ လှလိုက်တာ အဲပန်းမျိုး မြင်တောင် မမြင်ဖူးဘူး။ ငရုတ်တွေ ခရမ်းချဉ်တွေတော့ မယူတော့ဘူး။ ခလေးက စိတ်မချရဘူး။ ခူးစားဖို့များတယ်။
Ma Ma says: နဂါးမောက်က စိုက်ရသိပ်မခက်ဘူးလို့ ပြောတယ်။
နေပြည်တော်မှာ နဂါးမောက်စိုက်ခင်း အကြီးကြီးတွေ့ဖူးတယ်။
Foolish Girl says: နဂါးမောက်လိုချင်တယ် ….
Thint Aye Yeik says: စိုက်ချင်စရာာာာာ
သူကြီးရဲ့ သမိုင်းကလည်း ကူ ရေးချင်စရာ အနော့်မှာတော့ စိုက်စရာ မြေ မရှိလို့ မြေလေးတစ်ကွက်လောက်ပါ ဝယ်ပေးသွားမယ်ဆိုရင် ပို ကောင်းမှာ
Ma Ma says: နှင်းဆီပန်းအရောင်စုံ (အနက်ကလွဲလို့) လိုချင်ပါသည်။
ရချင်တာရ၊ မရချင်တာနေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: မှတ်ထားလိုက်ပြီ…။
အမတော်ကို အပိုဆု.. ငရုပ်သီးမျိုးတွေပါပေးမလို့..။ ၀ယ်တောင်ပြီးသွားပြီ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1241
Novy says: သူကြီးေ၇ ..
မျိုးစေ့လေးတွေအကုန်သဘောကျတယ် မြေဧက၂၀ကျော်ရှိတယ် စမ်းစိုက်ကြည့်ချင်တယ် အောင်မြင်ရင်တော့
kai says: Rainbow ပန်းရောင်စုံ စပယ်ရှယ်လစ်လုပ်ပေါ့…။
rainbow tulip အော်ဒါမှာလိုက်တယ်..။ လာဖြစ်ရင် သယ်လာမယ်..။ မလာဖြစ်ရင်လူကြုံပို့မယ်…။
Novy says: ခရန်ဘယ်ရီ နဲ့ အဆအိဘယ်ရီ မျိုးလည်း စမ်းစိုက်ကြည့်ချင်တယ်
အောင် မိုးသူ says: အဲ့သည် ရိန်းဘိုးလေးတွေလည်း လိုချင်တယ်။ သူကြီးရေ အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး နှစ်စေ့သုံးစေ့ဆိုရပါပြီ။
CharTooLan says: အဲ့အရောင်စုံက ဖိုတိုရှော့မှုတ်ရင် နဲနဲလိုဂျင်ဒယ်
ပီးတော့ အပေါ်ပုံတွေထဲက ကလေးလေးကိုင်နေတဲ့ အလုံးပင် နဲနဲ :D
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ထူးဆန်းတဲ့နှင်းဆီပန်းတွေပါလား..ခုမှမြင်ဖူးတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4021
manawphyulay says: စိုက်လို့ရတာ အကုန်စိုက်ချင်တယ်။ တကယ်ပေးမယ်ဆို ကျေးဇူးအထူးတင်ချင်ပါတယ်ရှင်။
တကယ်စိုက်ချင်တာပါ။ ၀ါသနာလည်း ပါပါတယ်ရှင့်။
kai says: မြေဘယ်လောက်ရှိသလဲ…။
အဲ.. နေရောင်တော့ရှိရမယ်..။ ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ရတယ်.. လေ့လာစုံစမ်းနိုင်ရမယ်..။
အခုဝယ်မယ့်မျိုးစေ့တွေထဲမှာ.. တစေ့ တဒေါ်လာတန်တောင်ပါသမို့.. တကယ်ကိုလုပ်နိုင်မှ.. လုပ်စေချင်..။
ကျုပ်ကတော့.. ၄လက်မအပင်ပေါက်ကလေး ၂မျိုး.. ( carolina reaper ငရုပ် နဲ့ စပယ် (Jasmine ‘Maid of Orleans’ (Jasminum sambac)) ကို ပန်းအိုးထဲစမ်းစိုက်တာ.. တလနဲ့.. ငရုပ်က.. ၈လက်မလောက်ရောက်.. စပယ်က..အညောင့်ကလေးတွေစထွက်လာပြီ..။
အောက်က စပယ်၃မျိုးမှာ.. မြန်မာပြည်မယ် ဘယ်မျိုးတွေရှိလဲသိချင်သား..။
manawphyulay says: သုံးမျိုးလုံးရှိတယ်တဂျီး
Grand Duke ကိုတော့ စပယ်အိုးပုတ်လို့ ခေါ်တယ်။ အိမ်မှာက အောင်သပြေပင်တွေလည်း စိုက်ထားတယ်။ စပယ်ပင်ကတော့ အလယ်က ပန်းမျိုးတော့ အဘွားအိမ်မှာ ရှိတယ်။ အပင်စိုက်ရတာလည်း တစ်နေ့ တစ်နေ့ အညှောင့်ထွက်လာပြီလား ဘယ်နေရာက ဘာဖြစ်နေတယ် အမြဲကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်ရတယ်။ အခုတောင် သစ်ခွပင်လေး တစ်ပင်လက်ဆောင်ရတာ ရေလောင်းရတာနဲ့ ဆေးထည့်ရတာနဲ့ အခု အတက်တွေ ထွက်နေတော့ ပျော်မိပြန်တယ်။ ပန်းပင်က တချို့ကျတော့ ဈေးကြီးတော့ မ၀ယ်နိုင်ဘူး။ ငရုပ်ဆိုလည်း အလှပင် ပေမယ့် စားလို့ရတယ်။
kai says: 30+ ORGANICALLY GROWN Hot Pepper Mix ကိုပေးမယ်..။ နယူးယောက်ကမှာထားတာ ရောက်နေပြီ..။
အကုန်အစပ်စားချည်း..။ မြန်မာပြည်မယ်.. မရှိတာတွေပါမယ်ထင်တယ်..။
စိုက်ပုံစိုက်နည်းက.. အောက်ကအတိုင်း.. ကြည့်ဘာသာပြန်ပေတော့..။
အောင် မိုးသူ says: စံပယ်ကတော့ အိမ်မှာရှိပြီးသား နှင်းဆီနဲ့ ကန္တာရပင်မျိုးစေ့လေးတွေ လိုချင်တယ်။
kai says: ကြာပန်းလေးမျိုး အရောင်၎မျိုး…ဘယ်သူယူမလဲ..
Ma Ma says: ၄ရောင်လုံးကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် မစိုက်တတ်ဘူး။
သူ့ကိုပေးရင် အတော်ပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: လရောင်ထိမှပွင့်သော ပဒုမ္မာကြာပန်းဆိုပြီး.. ပွင့်နေတာတွေ့ဖူးတယ်..။
ညမှပွင့်တာ… အဖြူရောင်.. အထပ်အထပ်နဲ့အနံ့မွေးပြီး တော်တော်လှတာ…။
Thint Aye Yeik says: လရောင်ထိမှ ညမှာ ပွင့်တာက ကုမုဒ္ဒြာကြာ မဟုတ်လား။
ပဒုမ္မာကြာက ရိုးရိုး ကြာကန်တွေမှာ ပွင့်တာပဲလေ။
ကုမုဒ္ဒြာကြာကို အပင်ကြီးတစ်ပင်မှာ တွယ်ကပ်ပြီး စိုက်ထားတာမြင်ဖူးတယ်။
လပြည့်ညမှာ အစွမ်းကုန်ပွင့်နေတာကို မြင်ဖူးတယ်။
အခု သူကြီး ပြထားတာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ။.သေချာတော့ မမှတ်မိ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က မြင်ဖူးတာ။
kai says: ဟုတ်ပါ့..။ အပြောမှားသွားတာ..။
Thint Aye Yeik says: ၂၀၀၄/၅ လောက်က ရခိုင်ဒေသ ကျွန်းပေါ်မှာ
.ကြာ တော်များများ ရှိနေတာ မြင်ခဲ့ဖူးတယ်။
.ကြာကန်ကြီး အကြီးကြီးတစ်ကန်ထဲ ဆင်းပြီး ကြာခွက်တွေ ချိုး စားခဲ့ဖူးတာပေါ့။ ခြေထောက်ကို ကြာနွယ်တွေညိလို့။ အဲ့ဒီကြာခွက်အဖြစ်စားလို့ရတာလေးတွေ သီးတဲ့ကြာက ပဒုမ္မာကြာ ထင့်။
.နောက်ပြီး ရိုးရိုးကန်သေးသေးလေးတွေထဲမှာ ကြာညို ကြာနီဖူးလေးတွေ အများကြီး။
”ရိုမန့်တစ်ကြာ” လို့တောင် ဆိုချင်ရဲ့။
လပြည့်ညမှ ထကြည့်ရ ရနံ့ရှူရလို့။
Was this answer helpful?LikeDislike 1241
Novy says: ကုမုဒ္ဒြာကြာလို့ခေါ်တယ် မနိုအိမ်မှာရှိတယ်
ညလစထွက်ချိန် ၇နာရီလောက်ကနေစပြီးပွင့်လာတာ ၁၁နာရီလောက်မှ အပွင့်လုံးဝ အာသွားတယ်
Was this answer helpful?LikeDislike 2223
ရွှေတိုက်စိုး says: ပေးချင်တာသာပေး.. အကုန်စိုက်မယ်..
kai says: ခရမ်းချဉ်သီးမျိုးပေးမယ်…။
ရှိသမျှ အလုံးကြီးမျိုးတွေ.. ပေါင်း ၂၂မျိုး…။
ဦးဦးပါလေရာ says: စိုက်နည်းလေးတွေတော့ လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်
၀ီကီထဲ ရှာ .. ဆိုတဲ့သဘောလား..
kai says: ဟုတ်ပါ့..။ စာတော့ဖတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း..။
Ma Ma says: အလကားပေးမည်ဆိုတာနဲ့ တောင်းနေတာ။
အပင်တွေ အပွင့်တွေ ပြန်ပြဆိုရင် ဒုက္ခ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သဂျီးဆီက နှင်းဆီမျိုးစေ့တောင်းထားလို့ သက်သေပြထားတဲ့ လင့်ခ်။ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1601502006843678&set=pcb.1087134887991353&type=3&theater
kai says: ရန်ကုန်မှာ နေဖို့သိပ်အချိန်ရမယ်မထင်ဖူး..
မတွေ့ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုတာကို.. အမတော်တွေကိုပဲ.. အကုန်အပ်သွားမယ်တွေးတယ်..။
ကြည့်သာကျက်ပေတော့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 486
Swal Taw Ywet says: သူကြီးရေ့။
ရွာထဲ မေမြိုက သူတွေ မရှိဘူးထင်သဗျ။
ကျနော် သူကြီးပို့စ် ပြပြီး ကြွားလိုက်ထာ ၀ိုင်းရယ်နေကြလေရဲ့။
ပန်း- နှင်းဆီ ပန်း ရောင်စုံကတော့ ပြင်ဦးလွင်မှာ ပေါမှ ပေါ ဆိုဘဲ။
သူကြီးတို့ ပြည်မှာ ပြည်နယ် တနယ်က တနယ် တောင် မျိုးစေ့ အကူးမခံ သယ်ဆောင်ခွင့် မပေးတဲ့ ဥပဒေ တွေ ရှိတယ်ဆို။
ရန်ကုန် လေဆိပ် မှာ
ပါတာ အကုန် ချိတ်ပိတ်နေမှာလည်း စဉ်းစားထားဦး။
ပန်းမှ အပ ကျန် စီးပွားရေး ဈေးကွက်သစ် အပင်အားလုံးကို ကြိုဆိုပါသဗျာ။
လရောင်ဆန်းမှ ပွင့်တဲ့ ကြာပန်းကတော့ ပေါမယ်ဗျို့။
ဦး ကြီးမိုက်တောင် ပို့စ်တင်ပေးဘူးသေးထင်ရဲ့။
မအိတို့တော့ မြူးးးနေမှာ မြင်ယောင်သေးးး။
မြန်မာနိုင်ငံမှ လူကြုံပါးလိုက်သော ချဉ်ပေါင်ရွက်ကြော် စားပြီး မန့် လိုက်သာ။
kai says: တိန်..
sorrow says: ..တားတားရှိပါတယ်ခင်ဗျ…အဲ့လိုအထူးအဆန်း.နှင်းဆီတွေက မေမြို့ဘက်မှာမရှိဘူးဗျ
… အိမ်မှာနှင်းဆီခြံရှိတယ်ခင်ဗျ… များသောအားဖြင့်..အနီ အပန်း အဖြူတွေပဲများပါတယ်…
kai says: ခရမ်းရောင်.. ဂေါ်ဖီ၊ မုန်လာဥ။ ခါဂျစ်ဥ.။ ပန်းပွင့်.. အဲဒါတွေက… ယူအက်စ်မှာကျ.. ဈေးကြီးပေမယ့်.. ၀ယ်လို့ရတယ်..။ ပိုပြီး အဟာရဖြစ်တယ်ပြောတာပဲ..။
စိတ်ဝင်စားသူလည်း ရှိပုံမပေါ်သေး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သီးပင်စားပင် စိတ်မ၀င်စားဘူး။
ပန်းပင်တောင် စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ ရှင်အောင်မနည်းစိုက်ရမှာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ရွာသူတွေ မေမြို့ဖက်တော့ ရောက်ဖူးကြတာ များပါတယ်။
သဂျီးပြတဲ့ နှင်းဆီရောင်စုံ (သက်တန့်၊ ပျောက်ကြား) တွေတော့ မမြင်ဖူးဘူး။
အောင် မိုးသူ says: သူဂျီး အကုန်လိုချင်တယ်။ ပေးမယ့်သူစာရင်းထဲ ထည့်ပေးပါနော်။ ကျတော်လည်းအပင်တွေ စိုက်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်။
အောင် မိုးသူ says: သူဂျီးအဆင်ပြေတဲ့ မျိုးစေ့သာပေးပါ။ ယူမယ်နော်။
အောင် မိုးသူ says: နှင်းဆီနဲ့ ကန္တာရပင် မျိုးစေ့လေးတွေ ပိုလိုချင်တယ် သူကြီးရေ။
kai says: မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်..။
အောင် မိုးသူ says: နှင်းဆီဆို အစုံလိုချင်တယ် သူကြီး ပေးမှာ ဟီးးးးး။ အရောင်တွေ အကုန်ကြိုက်လို့။
အောင် မိုးသူ says: ကန္တာရပင်က ရန်ကုန်မှာရှိပေမယ့် ရှားတယ် သူကြီးရ ဈေးလည်းကြီးတယ်။
အောင် မိုးသူ says: ကျတော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို ကန္တာရပင်တွေကို အဲ့ကနေပဲ လှမ်းမှာတာ သူကြီးရ။
kai says: ယူအက်စ်..အထူးသဖြင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ.. အပင်တွေက.. ဥပဒေအရ..သွင်းခွင့်မရှိပိတ်ထားပါတယ်…။ ပြည်နယ်ချင်းတောင်မရ..။ ဖရီးဝေးအတိုင်းကားမောင်းဝင်လာရင်.. နယ်စပ်မှာဂိတ်ရှိသဗျ..။ လူကြည့်ပြီး..ဖမ်းတာစစ်တာ…။
မိရင်.. ဒဏ်ကြေးချ.. ပစ္စည်းသိမ်း…။
ဈေးကလည်း.. မြန်မာပြည်ထက်တော့ ကြီးမှာသေချာ..။
အဲဒါကြောင့် .. ဖြစ်နိုင်ရင်… မြန်မာပြည်မယ်ရှာရခက်တာကိုမှ.. တကယ်စိုက်မယ်ပြုစုပျိုးထောင်မယ်ဆိုမှ… မှာစေချင်တာ..။
အခုမှာတာအကုန်လိုလိုက.. ပြည်နယ်တွေနဲ့ နိုင်ငံခြားတွေကနေ..မှာထားတာဖြစ်ပြီး…
ပြည်တွင်းအ၀င်လွတ်လာပြီး လက်ထဲရောက်တယ်ထားဦး.. ကျုပ်မြန်မာပြည်အလာ.. လေဆိပ်ကပြန်အထွက်ဘာဖြစ်မယ်မသိသေး…။
အဲဒါကြောင့်..။ Is it possible to bring fruit or plants into California? What happens if …
အောင် မိုးသူ says: အာ့ဆို နှင်းဆီမျိုးပဲ ယူမယ်နော် သူကြီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 206
ko six says: ဟွာလေ
စာရင်းလေးတော့ တို့ထားပါဦး သူဂျီးမင်း
kai says: အပင်ပုံတွေပြလေ..။ ပိုပြီး အချဉ်မျိူးဖြစ်သွားအောင်.. ကူမယ်လေ..။ Ice Pink Finger Fruit Lime
ဆို ယူအက်စ်အထိတင်.. တစေ့၂ဒေါ်လာလောက်ရှိတာ..။ အဲဒီသံပုရာသီး ဂျူးတွေရဲ့ ဘာသာရေးထဲမှာသုံးသတဲ့..။
အောင် မိုးသူ says: မရှိဘူး သဂျီး
sorrow says: ..အဲ့လိုသံပုရာပင်တော့ မေမြို့မှာ ရှိတယ်ခင်ဗျ…အိမ်မှာတောင်အပင်ရှိသေး… သူ့အခွံအသားက ခပ်ထူထူ ခပ်ရှိန်းရှိန်းနဲ့.ဆတ်တောက်ဆတ်တောက်နဲ့ စားလို့ရတယ်…အထဲကအသီးကတော့ အရည်သိပ်မပါသလိုပဲဗျ… ကချင်တွေတော့ အရက်နဲ့စိမ်ပြီး ..ဒဏ်ကြေဆေးလဲလုပ်…အစာကြေဆေးလဲလုပ်သောက်ပါရဲ့….
kai says: ဂျူးတွေလည်း.. ယိုလုပ်စားတယ်ရေးထားတယ်..။ မြန်မာပြည်မယ်.. ရှောက်သီးနဲ့ဆေး..ဘာညာလုပ်တဲ့သူင်္တေ.. အဲဒီအသီးကလုပ်ရင် ပိုကိုက်မလားတော့မသိ…။
ဈေးကတော့တော်တော်ကြီး၏..။ တစေ့.. ၅ဒေါ်လာလောက်ဖြစ်နေတယ်..။ အစ္စရေးကမှာရမှာ.. ပို့ခကျန်သေး..။
kai says: The Finger Lime isarare Native Lime tree. The fruit is extremely unique, looking likeasmall cigar. The pulp is light pink in colour and resembles caviar. Good flavour andahigh yielding variety. Fresh delightful flavour and crunchy texture, very delicate red pearls. Collectors seeds, blood red fruit.
အဲဒါဒီနေ့ရပြီ..။ ဘယ်ကဘယ်လို.. လှည့်လာသလဲတော့မသိ..။
ပို့လိုက်တာ.. Lao က…။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: နှင်းဆီက အစေ့လား သဂျီး။ အံ့သြလိုက်တာ။ အဲဒါ ဆို အကုန်ယူမယ်နော် သဂျီး။ အဲလောက်လှတဲ့ နှင်းဆီ အကြားတွေ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသေး။ ဖြစ်ထွန်းအောင် စိုက်မှာပါ သဂျီးရဲ့။
သဂျီး မျိုးစေ့တွေယူလာလို့ ရွာသူရွာသားတွေ အဝေမတည့်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ရန်တွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။
kai says: အဲဒါ အခု ဒီမှာတင် ဘယ်သူဘာရမလဲ.. ချရေးပေးနေတာလေ…။
ရပြီး ကိုယ့်ဖာကိုယ်ပြန်ညှိကြ..။ မျိုးစေ့ကနေအပင်ပေါက်လာရင်.. ပြန်ရှယ်ကြပေါ့…။
မျစ်မမက.. နှင်းဆီတော့မသေချာ..။ နဂါးမောက်သီးတော့ ၄မျိုးရမယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: တကယ်လို့ ပြုံးညီမ အတွက် နှင်းဆီမျိုးစေ့ သူကြီး ဆီက နေ မရ လိုက်ရင် ဒီ က နေ နှင်းဆီ မျိုးစေ့ တွေ နောက်တစ်ခါ ရွာပြန်လာရင် သယ်လာပေးပါ့မယ်။ သူကြီး အကြံ ကိုလဲ သဘောကျလို့။ :-))))
၀င့်ပြုံးမြင့် says: တကယ်လား။ အမလတ်ရေ။ ရမယ်ဆို အကုန်ယူမယ်နော် ။ နှင်းဆီက အကြိုက်ဆုံးပန်း။
etone says: အရောင်ဆန်း နှင်းဆီပန်းမျိုးစေ့တွေ လိုချင်ပါတယ် ။
တကယ်ပေးမယ်ဆိုလိုတာတွေ ပြင်ဆင်ထားလိုက်တော့မယ် …. ဟီး :D
အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေမှာ မြင်နေရတယ် အဲ့လို မျိုးစေ့တွေ ရောင်းတယ် ဘာညာပေါ့ ။ နှင်းဆီတွေက အရောင်ဆန်းလွန်းတော့လည်း တကယ်စိုက်လျှင် ဒီလို အရောင်ထွက်ပါ့မလားလို့ အဲ့ကတည်းက စမ်းချင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်မိတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီးတယ် … တစေ့ကို 2500လားပဲ …. ။
ဟီး … အလကားပေးမယ်ဆို ပျော်တာပေါ့ ။
တယောက်တည်းနေတဲ့ ကိုယ့်အခန်းကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးဖို့ တွေးနေတာ ။ အိမ်ပြင်မှာတင်မဟုတ်ပဲ အိမ်ထဲမှာပါ စိုက်ချင်ထှာ ။
အောင် မိုးသူ says: ဘယ်အွန်လိုင်းမှာရောင်းတာမြင်မိလဲ စုံစမ်းကြည့်ချင်လို့
kai says: တုံမမကို.. သက်တန့်ရောင်စုံနှင်းဆီ.. ၁၀စေ့ပေးမယ်..။ လက်ထဲရောက်နေပြီ..။
ပို့လိုက်တဲ့စာတိုက်အိပ်ကို ဖောက်ပြီး ပြန်ပိတ်တော့ထားတယ်..။ လွတ်လာတဲ့သဘော..။
တလောကလည်း.. မယုံလို့ အပင်၂ပင်မှာစိုက်တာ.. ရှင်နေပြီ..။
ငရုပ်သီးစေ့လည်း.. ကမ္ဘာ့အစပ်ဆုံးဆိုလို့.. မှာပြီးစားတာ.. တကယ်ကိုစပ်…။
ဆေးတွေဘာတွေဆိုးပြီး.. ညာတော့ညာလောက်မယ်မထင်ပါဘူး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1848
nozomi says: သဂျီး
Kaung Kin Pyar says: ရနိုင်ဦးမယ်ဆိုရင်တော့ နှင်းဆီစပ်မျိုးနဲ့ ကန္တရပင်တွေ လိုချင်တယ် သဂျီးရယ်…။ အိမ်ဘေး ခြံမြေမှာလဲ စိုက်ထားတယ်… (သက်သေ.. မ၀င့်ပြုံးနှင့် အလင်းဆက်.. )
အဒေါ်ကိုယ်တိုင်ကလဲ ခြင်ကျားပူမှာ.. ပန်းဆိုင်လုပ်ခဲ့တာရယ်…၊ ခုဒီပြန်လာပြီး.. အိမ်မှာကိုယ်တိုင်စိုက်သလို.. မြေပဒေသာကျွန်းမှာလဲ ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်…။ ရနိုင်ဦးမယ်ဆိုရင်တော့ အပင်နဲ့ မျိုးစေ့လေးတွေ နည်းနည်းလောက်လိုချင်ပါတယ်…
kai says: သက်တန့်နှင်းဆီအတွက်မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်..။ ခရမ်းချဉ်သီး၂၂ မျိုး ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က အခုပဲရောက်လာတယ်..။
ခင်ဇော် says: တဂျီးး
kai says: ၁၉ညထွက်မယ်.. ၂၁ ရောက်မယ်ထင်တာပဲ..
၃၁ ပြန်မယ်…။ လက်မှတ် Waiting list.
ထရန်စစ်.. ထိုင်ဝမ်တဲ့..။ အဲဒါက ဈေးအပေါဆုံးလေ..။ ကာဌေးဖစိဖိတ်လိုက်ရင်.. ဟောင်ကောင်…။ ဟိုကလေးပိစိလေးဆီရောက်နိုင်ပေမယ့်.. အချိန်ကဘယ်လိုမှမရ..။
စင်္ကာပူဖက်က ပတ်ရင် ဈေးတော်တော်ကြီးသဗျ..။ သဌေးတွေနေလို့ထင်တယ်.။ Was this answer helpful?LikeDislike 2285
Ma Ei says: သူကြီးရေ
1..ကျူးလစ်ရောင်စုံ
kai says: စာရင်းမနိုင်ပါဘူး ဆိုနေမှ.. တယောက်တမျိုး.. စာရင်းတွေကတော့ ရှုပ်လာပြီ..။
ဆိုတော့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ထင်သားးး
Ma Ei says: ..ဆိုတော့..
kai says: ဒီနေ့.. ဟောင်ကောင်ကနေ.. အစေ့တွေထပ်ရောက်လာတယ်..။
ဆိုတော့.. စာရင်းကိုင်ပေးပါလား.. Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: နှင်းဆီပန်း ရောင်စုံ လိုချင်ပါတယ် ဒဂျီးရေ့…
ဒီမှာ စိုက်လို့ မရပေမယ့် ရန်ကုန်အိမ်မှာ စိုက်ချင်လို့ဘာ။
ခင်ဇော် says: နာ လိုက် စိုက် ပေးရမားငင်?
ဂျက်စပဲရိုး says: မာမီ စိုက်မှာ သွားကူပေးမလားငင်…း)
ခင်ဇော် says: နာ့ လက် ကို ယုံရင် ကူပါတယ်။
ဂျက်စပဲရိုး says: ကူဘာ…း)
ကံ့ကော်ပင်တောင် သုံးလေးပင် ရှိနေပြီ စိုက်လိုက် သေလိုက် စိုက်လိုက် သေလိုက် နဲ့ :P
black chaw says: သူကြီး…/
မဒမ်ဘလက် က အော်ဒါ မှာပါတယ်…/
နှင်းဆီ အနက်ကလွဲရင် အကုန်လိုချင်ပါတယ်တဲ့ ခင်ဗျာ…/
ဘယ်အချိန်က ၀င်ကြည့်ထားတယ် မသိပါဘူး…/
အဲ့ဒါလေး လာပြောတာပါ ခင်ဗျာ…/
kai says: အောက်မှာ.. အရောင်နှင်းဆီတွေရဲ့ ဆိုလိုသဘောတွေတွေ..။ သိတဲ့သူတွေထပ်ဖြည့်ပါဦး..။
မြစပဲရိုး says: သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် နဲ့ စကားပြောရင်း သူ့ခြံထဲက နှင်းဆီပင် တွေ အကြောင်း ရောက် တာနဲ့
ရွာထဲ ပြောနေတဲ့ ရောင်စုံနှင်းဆီပန်း အကြောင်းမေးတော့ သူက အဲဒါတွေ က အဖြူအပွင့်တွေ ကို ဆေးဆိုးတာတွေ တဲ့။
အဲဒီလို ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ထူးဆန်းအရောင် နှင်းဆီ တွေ က တကယ် အစစ် မရှိလို့ ပြောတာမို့ ပိုသေချာအောင် ဂူးဂဲလ်လိုက်တော့ သူပြောတာ ဟုတ်သလို တွေ့တာမို့ ဝင်ပြီး အသိပေးပါတယ်။
တော်ကြာ အရိပ်တကြည့်ကြည့် မျှော်လင့်ချက် နဲ့ စိုက်ထားကြပြီး အပင် ထွက်မလာရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြမှာစိုးလို့ ပါ။
ပုံမှန် နှင်းဆီ အရောင် နဲ့ အစေ့ တွေ ကတော့ အစစ် ပါတဲ့။
ခရမ်းရောင် တစ်မျိုး ကတော့ ရှားပါးအစစ်ပါတဲ့။
အပြာ၊ အမဲ၊ ရိန်းဘိုး၊ အစိမ်း စတာတွေက အတုလို့ ဆိုထားပါတယ်။
သူကြီးမင်း လဲ မဝယ်ရသေးရင် အဲဒီ အရောင်ဆန်း နှင်းဆီတွေ အကြောင်း ကို အသေအချာမေးပြီးမှ ဝယ်စေလိုပါတယ်။
တော်ကြာ အတု ဖြစ်နေမှာစိုးလို့။
There areafew things you should know about buying roses and rose seeds. First of all rainbow roses do not exist. They are dyed.
အောင် မိုးသူ says: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1581638685485083&set=a.1413115989004021.1073741828.100009169017281&type=3&theater
ဒါ အိမ်မှာပွင့်နေတာလေး အရောင်ကြားလေးပါ အရီးရဲ့
မြစပဲရိုး says: မောင်အောင် ရဲ့ အပင် က ကိုင်းကစိုက်တာလား။ တစ်ချို့ ကိုင်းကူး ပြီး အမျိုးစပ်လို့ ရပါတယ်။
အခုဟာ က အစေ့ က နေ စိုက်ရင် အပြောက် အကျား တွေ မရ သေးဘူး လို့ ပြောတာပါ။
တကယ်တော့ အရီး လဲ အသေအချာမသိပါဘူး လေ။
သူကြီးမင်း စေတနာ နဲ့ အပွင့်လှလှ တွေ ရမှာ လို့တော့ ယုံပါတယ်။ :-))
(Don’t forget to think about the other side of coin) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: http://tulipsinholland.com/2014/08/tulips-tuesday-12-august-2014-2/
Lots of favorite tulip colors this week. From red to white, dark purple or black and multi colored tulips. We had alsoarequest for rainbow tulips, unfortunately they don’t exist yet. So we hadarainbow rose. Haveawonderful Tuesday today and see you all next week for tulip Tuesday.
ဟော်လန် မှာ လုပ်တဲ့ ကျူးလစ်ပန်းပွဲ မှာ သက်တန့်နှင်းဆီ တွေ တကယ်ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။
အဲဒါက ဆေးဆိုးတာမဟုတ်ဘဲ ပင်စည်ကနေ ဆေးထိုးပြီး ပွင့်ဖတ် ထဲ ကို အရောင်ထည့်တာပြောပါတယ်။
တကယ်လို့ သူကြီး ဝယ်ထားပြီး လို့ ပေးမယ်မှန်းထားလဲ ပေးစရာရှိတာ ပေးလိုက်ပေါ့။
စိုက်တဲ့ သူ တွေ ကလဲ အရောင်စုံ ကို မှန်းမထားဘဲ ပေါ်ချင်တဲ့ အရောင်ပေါ် လို့ တွေးထားရင်တော့ စိတ်ပျက်ရတာ သက်သာမယ်ထင်ရဲ့။
ထွက်ချင်တဲ့ အရောင်ထွက်လာမှာ ဆိုရင် ပိုတောင် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသေးတော့။ :-)))
စိုက်ပြီး.. ပေါ်ချင်တဲ့အရောင်ပေါ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ငယ်ငယ်က ဒေလီယာပန်းစိုက်ဖူးတယ်။
မူလအဖြူရောင်ပန်းကို ဆေးနီရေဖြန်းပေးရင် ပန်းက အဖြူနဲ့အနီကို စပ်နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပွင့်တာ အရမ်းလှပြီး အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 712
Lay Pai says: ပန်းအိုး နဲ့ ထည့်စိုက်လို့ ရတဲ့ ပန်းမျိုး တခု လောက် ပေးမယ်ဆို လိုချင်တယ်။
Swal Taw Ywet says: နိုဝင်ဘာ ပြန်ရောက်တော့ မှ ရွာလူကြီးတွေဆီ ဘာတွေ ကျန်သေးသလည်း လိုက်ရှာ စုယူတော့မယ်။
မန်းလေး ရှမ်းလေးကျွန်းနားက ကိုင်းလုပ်ယာထွန်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်။
ကောင်းကောင်း စိုက်နိုင် မျိုးဖြန့်နိုင်မယ် အသေအချာ။
မျိုးစေ့သစ်များ သယ်ကြည့် အုံးမယ် ဖြစ်ပါကြောင်းး။
manawphyulay says: တဂျီးရေ… ပန်းမျိုးစေ့တွေ အစုံလိုချင်ပါတယ်။
အရောင်ဆန်း နှင်းဆီပန်းမျိုးစေ့တွေ လိုချင်ပါတယ် ။
kai says: ဒီထဲကစာရင်းအတိုင်းတော့.. ဟိုစုံတွဲနဲ့.. ဒီရွာသူားတွေ.. တာဝန်ယူလုပ်ပေးမလားပဲ..
စာရင်းမနိုင်သူ..ကျုပ်လက်ကတော့..လွတ်သွားပြီမို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: အတွဲလွဲမယ် သဂျီး.. ပတ်တနာချိတယ်နော်..
kai says: FB ကနေ ဇီဇီလုပ်ပေးထားတာ.. ပြန်မ,လာတာ.. စာရင်းကျန်အောင်လို့..။
‎Khin Zaw‎ ဒါက စာရင်း လုပ်ပေးထားတာ။
သညားကတော့ ကျန်ချင်တာကျန်။ အရင်ဆုံး ဝင်တောင်းထားတာမို့ ရချင်တာပဲ သိတယ်။
ကျန်တာတော့ ပို့(စ) ထဲမှာ ကော်မန့်မှာမြင်သလောက် စုပေးထားတာပဲ။
ရွာထဲ က စာရင်းပဲ လုပ်လို့ရတာမို့ လုပ်ထားတာ။ အပြင်မှာ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုတောင်းထားတာ မသိလို့ မပါနိုင်ဘူးး
တဂျီးက စာရင်းမနိုင်ဘူးဆိုလို့ ဝင်ကိုင်ပေးတာပဲ ရှိတာ။
ခင်ဇော် – (တဂျီး – ၀ယ်လိုက်တဲ့အထဲက..တမျိုး.. တစေ့စီရမယ်…။ ကြည့်သာစိုက်ပေတော့..။)
uncle gyi – ဘရာဇီးကကော်ဖီထွက်တာဆိုတော့မြန်မာကော်ဖီထွက်တဲ့နေရာတွေစိုက်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ရရင်တော့အမှတ်တရစိုက်ချင်ပါတယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် – dragon fruit မျိုးစေ့ကိုတော့ လိုချင်ပါတယ် သဂျီးရေ။ သူက အပူကြိုက်တယ် ထင်တယ်။ rainbow ပန်းရောင်စုံလည်း ရမယ်ဆို နည်းနည်းလိုချင်ပါတယ်။နှင်းဆီက အစေ့လား သဂျီး။ အံ့သြလိုက်တာ။ အဲဒါ ဆို အကုန်ယူမယ်နော် သဂျီး။
Foolish Girl – နဂါးမောက်လိုချင်တယ် ….
Ma Ma – နှင်းဆီပန်းအရောင်စုံ (အနက်ကလွဲလို့) လိုချင်ပါသည်။
Novy – (တဂျီး- Rainbow ပန်းရောင်စုံ စပယ်ရှယ်လစ်လုပ်ပေါ့…။) ခရန်ဘယ်ရီ နဲ့ အဆအိဘယ်ရီ မျိုးလည်း စမ်းစိုက်ကြည့်ချင်တယ်။
အောင် မိုးသူ – ရိန်းဘိုးလေးတွေလည်း လိုချင်တယ်။ နှင်းဆီနဲ့ ကန္တာရပင်မျိုးစေ့လေးတွေ လိုချင်တယ်။
CharTooLan – ရိန်းဘိုးလေးနဲနဲလိုဂျင်ဒယ်။
manawphyulay – စိုက်လို့ရတာ အကုန်စိုက်ချင်တယ်။ (တဂျီး – 30+ ORGANICALLY GROWN Hot Pepper Mix ကိုပေးမယ်) တဂျီးရေ… ပန်းမျိုးစေ့တွေ အစုံလိုချင်ပါတယ်။ အရောင်ဆန်း နှင်းဆီပန်းမျိုးစေ့တွေ လိုချင်ပါတယ် ။
အမတော်ပဒုမ္မာ – (တဂျီး – ကာပန်းလေးမျိုး အရောင်၎မျိုး…ဘယ်သူယူမလဲ..အမတော်ပဒုမ္မာကိုပေးမှနဲ့တူတယ်..။)
ရွှေတိုက်စိုး – ပေးချင်တာသာပေး.. အကုန်စိုက်မယ်.. (တဂျီး – ခရမ်းချဉ်သီးမျိုးပေးမယ်…။ရှိသမျှ အလုံးကြီးမျိုးတွေ.. ပေါင်း ၂၂မျိုး…။)
ko six – သံပုရာအစစ်တွေ စိုက်ပါတယ်။စာရင်းလေးတော့ တို့ထားပါဦး သူဂျီးမင်း
etone – အရောင်ဆန်း နှင်းဆီပန်းမျိုးစေ့တွေ လိုချင်ပါတယ် ။ (တဂျီး – တုံမမကို.. သက်တန့်ရောင်စုံနှင်းဆီ.. ၁၀စေ့ပေးမယ်..။)
nozomi – သဂျီး ရောင်စုံနှင်းဆီလေးတွေလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ မဒမ်နိုက ပြောခိုင်းလို့ပါ။
Kaung Kin Pyar – ရနိုင်ဦးမယ်ဆိုရင်တော့ နှင်းဆီစပ်မျိုးနဲ့ ကန္တရပင်တွေ လိုချင်တယ် သဂျီးရယ်။
Ma Ei – သူကြီးရေ 1..ကျူးလစ်ရောင်စုံ။ 2..သက်တန့်နှင်းဆီ။ 3.. ဘာရရပါ လိုချင်ပါတယ်။
ဂျက်စပဲရိုး – နှင်းဆီပန်း ရောင်စုံ လိုချင်ပါတယ် ဒဂျီးရေ့…
black chaw – သူကြီး…/မဒမ်ဘလက် က အော်ဒါ မှာပါတယ်…/နှင်းဆီ အနက်ကလွဲရင် အကုန်လိုချင်ပါတယ်တဲ့ ခင်ဗျာ…/
Lay Pai – ပန်းအိုး နဲ့ ထည့်စိုက်လို့ ရတဲ့ ပန်းမျိုး တခု လောက် ပေးမယ်ဆို လိုချင်တယ်။
Swal Taw Ywet – နိုဝင်ဘာ ပြန်ရောက်တော့ မှ ရွာလူကြီးတွေဆီ ဘာတွေ ကျန်သေးသလည်း လိုက်ရှာ စုယူတော့မယ်။
Thakhin Kai Bwor ဇီဇိကို ကျေးဇူးကမ္ဘာ..။
ကမ္ဘာပါတ်ပြီးအခုမှရောက်လာတာက… အမတော်ပဒုမ္မာအတွက်.. ပဒုမ္မာကြာ ၄မျိုး ၁၀စေ့ရယ်..
၀င့်ပြုံးမမအတွက်.. နဂါးမောက် ၄မျိုး အစေ့၂၀၀ရယ်…။ ( လိုချင်သူခွဲနိုင်)
အခုထိ ရုရှားကနေမှာထားပြီး.. လက်ထဲမရောက်သေးတာက… Rare color Chili Pepper Rainbow (ပုံ)
မျိုးစေ့တွေကို ပုံအပ်ခဲ့တာ.. မွန်မွန်ကိုပါ..။ တာဝန်ယူပေးထားတဲ့အတွက်.. ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…..။
ကျန်တာ.. သူနဲ့ရှင်း.. သူနဲ့ရှင်း…
ခင်ဇော် says: ဒါက မျိုးစေ့ စာရင်း
အောင် မိုးသူ says: မျိုးစေ့တွေရပါပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူကြီး